Blog of Nyein Chan Yar: 2010.06
Location of Than Shwe’s House
နအဖရဲ့ လှိုင်ခေါင်းတွေ အကြောင်း video မှာ လှိုင်ခေါင်း တစ်ခုက သန်းရွှေရဲ့ အိမ်အောက်က ဖြတ်သွားတယ် လို့ဆိုတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သန်းရွှေအိမ်ကို Google Earth မှာပြတော့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားတော့ ရှာကြည့်ထားတယ်။ ကြည့်ချင်ရင် kmz file လေးကို ဟော့ဒီမှာ download လုပ်ပြီး Google Earthမှာ ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လဲ 19˚51'29.68"N , 96˚19'26.90"E မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြည့်လို့ရပါတယ်။
မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ Google ကရိုက်တဲ့ ရက်က Feb 20, 2006 ဆိုတော့ အရမ်းဟောင်းနေပြီ။
နောက်တစ်ခုပြေါရအုံးမယ် email တစ်ခုရောက်လာတယ်။ သန်းရွှေအိမ်တဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ စားပွဲပေါ်ကမှန်ဘောင်မှာ Arabic စာသားတွေ၊ အသုံးဆောင် ပစ္စည်းတွေကလည်း အာရပ်ဆန်ဆန်တွေ။ တကယ် ပုံတွေက အာရပ်သူဌေး တစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ပါ။ အဲ့ဒီ email ကလည်း ပျံ့နေလိုက်တာ "သန်းရွှေအိမ် ငါမြင်ဘူးတယ် " လို့ပြေါတာ သုံးလေးယောက်ပဲ။ တကယ်ပဲ။ စိတ်လေတယ်။
နအဖရဲ့ လှိုငျခေါငျးတှေ အကွောငျး video မှာ လှိုငျခေါငျး တဈခုက သနျးရှရေဲ့ အိမျအောကျက ဖွတျသှားတယျ လို့ဆိုတယျ။ အဲ့ဒီမှာ သနျးရှအေိမျကို Google Earth မှာပွတော့ ကြှနျတျောလညျး စိတျဝငျစားတော့ ရှာကွညျ့ထားတယျ။ ကွညျ့ခငျြရငျ kmz file လေးကို ဟော့ဒီမှာ download လုပျပွီး Google Earthမှာ ဖှငျ့ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ဒါမှမဟုတျလဲ 19˚51'29.68"N , 96˚19'26.90"E မှာ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ကွညျ့လို့ရပါတယျ။
မွငျတဲ့ အတိုငျးပဲ Google ကရိုကျတဲ့ ရကျက Feb 20, 2006 ဆိုတော့ အရမျးဟောငျးနပွေီ။
နောကျတဈခုပွောရအုံးမယျ email တဈခုရောကျလာတယျ။ သနျးရှအေိမျတဲ့ ကွညျ့လိုကျတော့ စားပှဲပျေါကမှနျဘောငျမှာ Arabic စာသားတှေ၊ အသုံးဆောငျ ပစ်စညျးတှကေလညျး အာရပျဆနျဆနျတှေ။ တကယျ ပုံတှကေ အာရပျသူဌေး တဈယောကျရဲ့အိမျပါ။ အဲ့ဒီ email ကလညျး ပြံ့နလေိုကျတာ "သနျးရှအေိမျ ငါမွငျဘူးတယျ " လို့ပွောတာ သုံးလေးယောကျပဲ။ တကယျပဲ။ စိတျလတေယျ။
Posted by Daythanix Chann at Monday, June 21, 2010 No comments:
Recent posts @ my new blog
WOFF font embedding
Counterfeit party names
Against the Army (I) zg1
Against the Army (I)
Posted by Daythanix Chann at Sunday, June 20, 2010 No comments:
ဟိုတစ်နေ့က လွင်မိုးညွှန်းတာကြောင့် woff ဆိုတာကို စမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။
woff ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စာမျက်နှာမှာ သုံးထားတဲ့ fontဟာ စာဖတ်သူတွေရဲ့ စက်မှာမရှိလည်း ရအောင် ပါ။
font file ကို ဒီ page တွေမှာ embed လုပ်တာကို ပြောတာ။
အရင်က ကျွန်တော်တို့ zawgyi သုံးခါစက eot နဲ့ သုံးခဲ့တဲ့ ဟာမျိုးပဲ။
eot, svg, sIFR, otf/ttf တွေပြီးတော့ ဒါ နောက်ဆုံးပေါ်ပဲ။ firefox 3.6 နဲ့ သုံးလို့ရပြီ။ တခြား browser တွေလည်း နောက် version တွေမှာ ရလာမှာပါ။
ထူးတာက ဒီ woffက file size အရမ်း သေးတယ်။ padauk font ကို woff ပြောင်းလိုက်တာ 91.5 KB ပဲရှိတယ်။ connection နှေးနှေးမှာ အေးဆေးပဲ ။
woff လုပ်ရတာလည်း အရမ်းအရမ်း လွယ်တယ်။
ဒီကနေ sfnt2woff.exeကို downloadလုပ်။
ဥပမာ padauk.ttf ကို ပြောင်းမယ်ဆို... sfnt2woff.exe file လေးကို padauk.ttf နဲ့အတူ folder တစ်ခုထဲမှာ အတူတူထား။
commend line ကနေ sfnt2woff.exe Padauk.ttf ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်။
"၀ှစ်" ခနဲဆို Padauk.woff ထွက်လာရော။
commend line မသုံးတတ်ရင် ဒီလိုလုပ်။
sfnt2woff.exe Padauk.ttf ဆိုပြီးရိုက်။
whatever.bat ဆိုပြီး ခုနက folder ထဲမှာ သိမ်း။
ပြီးရင် အဲဒီ whatever.bat ကို run လိုက်ရုံပဲ။
file ကို upload လုပ် ပြီးရင် CSS မှာ
/* Works only in WOFF-enabled browsers */
src: url(Padauk.woff) format("woff");
ဆိုတာလေး (URL file path မှန်အောင်ရေးပြီး) ဖြည့်ရေးပေးလိုက်ပါ။
PS: if you are using WinXP-SP2 and older, Uniscribe in your system may not render Unicode 5.1 fonts properly.
ဟိုတဈနကေ့ လှငျမိုးညှနျးတာကွောငျ့ woff ဆိုတာကို စမျးကွညျ့ဖွဈတယျ။
woff ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ စာမကျြနှာမှာ သုံးထားတဲ့ fontဟာ စာဖတျသူတှရေဲ့ စကျမှာမရှိလညျး ရအောငျ ပါ။
font file ကို ဒီ page တှမှော embed လုပျတာကို ပွောတာ။
အရငျက ကြှနျတျောတို့ zawgyi သုံးခါစက eot နဲ့ သုံးခဲ့တဲ့ ဟာမြိုးပဲ။
eot, svg, sIFR, otf/ttf တှပွေီးတော့ ဒါ နောကျဆုံးပျေါပဲ။ firefox 3.6 နဲ့ သုံးလို့ရပွီ။ တခွား browser တှလေညျး နောကျ version တှမှော ရလာမှာပါ။
ထူးတာက ဒီ woffက file size အရမျး သေးတယျ။ padauk font ကို woff ပွောငျးလိုကျတာ 91.5 KB ပဲရှိတယျ။ connection နှေးနှေးမှာ အေးဆေးပဲ ။
woff လုပျရတာလညျး အရမျးအရမျး လှယျတယျ။
ဒီကနေ sfnt2woff.exeကို downloadလုပျ။
ဥပမာ padauk.ttf ကို ပွောငျးမယျဆို... sfnt2woff.exe file လေးကို padauk.ttf နဲ့အတူ folder တဈခုထဲမှာ အတူတူထား။
commend line ကနေ sfnt2woff.exe Padauk.ttf ဆိုပွီး enter ခေါကျလိုကျ။
"ဝှဈ" ခနဲဆို Padauk.woff ထှကျလာရော။
commend line မသုံးတတျရငျ ဒီလိုလုပျ။
sfnt2woff.exe Padauk.ttf ဆိုပွီးရိုကျ။
whatever.bat ဆိုပွီး ခုနက folder ထဲမှာ သိမျး။
ပွီးရငျ အဲဒီ whatever.bat ကို run လိုကျရုံပဲ။
file ကို upload လုပျ ပွီးရငျ CSS မှာ
ဆိုတာလေး (URL file path မှနျအောငျရေးပွီး) ဖွညျ့ရေးပေးလိုကျပါ။
Posted by Daythanix Chann at Thursday, June 17, 2010 No comments:
Labels: font, how-to, mm-font
Chaw Yadana (ချောရတနာ)
She is the most beautiful, gorgeous, decent, cute actress model in Myanmar. :)
Posted by Daythanix Chann at Wednesday, June 09, 2010 No comments:
Labels: girl, Image, photo
အတုအပ ဆင်တူ ရိုးမှားများ
၁. The 88 Generation Student Youths (Union of Myanmar) ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ)
၂. Myanmar New Society Democratic Party မြန်မာ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ
၃. Wunthanu NLD (The Union of Myanmar) ၀ံသာနု NLD (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ)
အရင်ကတော့ ကုန်အမှတ် တံဆိပ် ဆင်တူ ရိုးမှားတွေ ရှိတယ်။ သောက်မြင်ကပ်လွန်းလို့ ဘယ်တော့မှ အဲ့လို တံဆိပ်တွေ မသုံးဘူ။
အခုဟာ ပါတီ။ ပါတီတောင် အတုတွေ ရှိနေပါလား။
ပါတီဖွဲ့တယ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင် လုပ်မယ့် လူတွေ ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။
ဟာာာ.... ဒီလောက် သောက်ရှက် မရှိတဲ့ လူတွေက...........
******** Unicode version *********
အတုအပ ဆငျတူ ရိုးမှားမြား
၁. The 88 Generation Student Youths (Union of Myanmar) ၈၈ မြိုးဆကျ ကြောငျးသားလူငယျမြား (ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံ)
၂. Myanmar New Society Democratic Party မွနျမာ့ လူ့ဘောငျသဈ ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ
၃. Wunthanu NLD (The Union of Myanmar) ဝံသာနု NLD (ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံ)
အရငျကတော့ ကုနျအမှတျ တံဆိပျ ဆငျတူ ရိုးမှားတှေ ရှိတယျ။ သောကျမွငျကပျလှနျးလို့ ဘယျတော့မှ အဲ့လို တံဆိပျတှေ မသုံးဘူ။
အခုဟာ ပါတီ။ ပါတီတောငျ အတုတှေ ရှိနပေါလား။
ပါတီဖှဲ့တယျ ရှေးကောကျပှဲဝငျမယျဆိုတာ နိုငျငံ့ ခေါငျးဆောငျ လုပျမယျ့ လူတှေ ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။
ဟာ.... ဒီလောကျ သောကျရှကျ မရှိတဲ့ လူတှကေ...........
Posted by Daythanix Chann at Thursday, June 03, 2010 No comments:
၃. Wunthanu NLD (The Union of Myanmar) ဝံသာနု NLD (ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံ)အရှကျကို မရှိကွဘူး။
[ Unicode version can be found here.]ဟိုတစ်နေ့က May 30 ရက်ဟာ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ၄နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့။ ယုတ်မာကောက်ကျစ် အောက်တန်းကျတဲ့ အစီအစဉ်ကို ဗိုချုပ်စိုးဝင်းက စီစဉ်တယ်။ ထောင်သားတွေကို လေးကျင့်ပြီး NLD အဖွဲ့သားတွေကို အသေရိုက်သတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ၁၀ဝ နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်။NLD အဖွဲ့သားတွေ ဒီလို ဘာလို့ အသက် စတေးခဲ့ရသလဲ။ ပြည်သူလူထုအတွက်ပါပဲ။ ပြည်သူလူထုကို စစ်ကျွန်ဘဝက ကယ်ဆယ်ဖို့ NLD နဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ကျောင်းသား/သူတွေ အသက် စတေးခဲ့ရတယ်။ ထောင်နှစ်ရှည်တွေ ကျခဲ့တယ်။ စစ်ကျောရေး စခန်းတွေက လူမဆန် နှိပ်စစက်မှုတွေ ခံခဲ့ရတယ်။
ကျွန်တော် ရေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ အပြစ်မဲ့သူတွေကို သတ်ခဲ့ ထောင်ချခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေပြန် မပြေါပဲတောင် သူတို လုပ်ရပ်တွေ တွေဟာ ဒီတိုင်းပြည်အပေါ် ဘယ်လောက် ဆိုးရွားတယ်ဆိုတာ။ (ဘာလိုလဲဆိုတော့ စစ်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပညာမဲ့ လူတန်းစားက ကျွန်တ်ေတို့တွေ စစ်အစိုးရကို အကြောင်းမဲ့ ဆန့်ကျင်﻿နေတယ် ထင်နေကြသေးလို့ပါ။)
စစ်အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ အာဏာက လုံးဝ ဆင်းမပေးချင်ဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုတ် စီးပွားရေးကိုတော့ လျှော့သင့်ပြီ။ Gas နဲ့ ရေနံ တွေရောင်း၊ သစ်တောတွေခုတ်ရောင်း၊ ကျောက်စိမ်းတွေ… လက်ညှိုးထိုး ရောင်းစား . . . ပြီးတော့. . . ရတဲပိုက်ဆံကို ကိုယ့်အိတ်ထဲထည့်၊ စစ်လက်နက်တွေဝယ်၊ ကျပ်ပြေးမြို့တော်ကိုဆောက်၊ လှိုင်ဂူတွေတူး၊ ပြေါရရင် မဆုံးဘူး။ ရှိသမျှ မြစ်တွေ ပိတ်ပြီး ရေကာတာတွေ ဆောက်တယ်၊ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်မှာ သဘာဝဂေဟစံနစ် ပျက်စီးမှာ အရေးမထားဘူး။ ရသမျှ ရေအားလျှပ်စစ် နိုင်ငံခြါးရောင်းစားအုံးမယ်၊ ပြည်သူတွေမှာ အမှောင်ထဲမှာနေနေရတယ်။ ရသမျှ Gas နိုင်ငံခြါးရောင်းစားပြီး ပြည်သူတွေမှာ အမှောင်ထဲမှာနေနေရတယ်။ နိုင်ငံမှာ မီးလင်းတဲ့နေရာဆိုလို့ ကျပ်ပြေးမြို့တော်ပဲရှိတယ်။ မီးမရှိတော့ လူတွေမှာ ကိုယ့်ဟာကို မီးစက်ပဲ အားကိုးရတယ်။ တစ်မြို့လုံး မီးစက်သံ ဆူညံညံ ကြားမှာ။ စက်ဆီနံ့တွေကြားမှာ။
စီးပွားရေးစံနစ် မပြေါင်းသရွေ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရှိနေသရွေ့ လခစားတွေအဖို့ ဘယ်လိုလခတိုးတိုး ချောင်လည်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကျိုးဆက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တွေနဲ့ ဝဲလည်နေအုံးမှာပဲ။ ပြည်သူလူထုမှာ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေမှာပဲ။ နအဖကတော့ တိုင်းပြည်စည်းပွားရေးသည် ငါတို့ အတွက်ဆိုပြီးဆက် လုပ်နေလေရဲ့ ။ နအဖအနေနဲ့ အာဏာကို ဆက်ကိုင်ထားချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်သူလူထုကြိုက်အောင် နေပြပေါ့။ နိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍဍာကိုသုံးပြီး ကြံ့ဖွတ်က လုပ်ပေးတာပါလို့ အမည်ခံပြီး လမ်းခင်းပေးတာလောက်ကတော့ ဘယ်သူမှ အရူးလုပ် မခံဘူး။
စီးပွားရေး ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူလူထုမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကောင်းကောင်းမရှိဘူး။ ပြေါရရင် ပြည်သူဆေးရုံဆိုတာ ဆရာဝန်ပဲရှိပြီး ဘာ facility မှမရှိလို့ ငွေကုန်ကြေးကျ များတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းပဲ အများစု အားကိုးနေကြရတယ်။ စစ်တပ်ဆေးရုံတွေမှာတော facility အပြည့် အပျံစားဆိုပဲ။ အခုလက်ရှိ ပြည်သူလူထုရနေတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အများစုကလည်း UNICEF, UNDP စတဲ့ UN အဖွဲအစည်းတွေနဲ့ အခြါး INGO တွေ ကလုပ်ပေးနေတာ။ (နအဖက သူတို့လုပ်သလို ဟန်ဆောင်နေတာ)။ ဒီ INGO တွေမှာ ကူညီတာတောင် အတားအဆီး အမျိုးမျိူးကြားက ခက်ခက်ခဲခဲ ကူညီကြရတယ်။
ပညာရေးစံနစ်ကလည်း လုံးဝ ယိုယွင်းနေပြီ။ အခြေခံပညာရေးမှာဆိုလည်း ဆရာ၊ဆရာမတွေ လခမလုံလောက်ရာက လေးစားထိုက်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေမှာ တပြါးမရှိတဲ့ပြဿနာ ကို ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရတော့တယ်။ ကလေးတွေ ကိုယ့်ဆီ ကျူရှင်တက်မှ ဆိုတာမျိုး၊ လက်ဆောင်ပေးမှ အမှတ်တိုးပေးတာမျိုး၊ ဝမ်းနဲစရာ ပျက်စီးမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ ကျောင်းအဆောင်အဦတွေများ ဆိုလည်း စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ကျောင်းတွေ အများကြီး။ Lab ဆိုတာတော့ ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေပြီ။ တက္ကသိုလ်တွေက တောထဲမှာ။ ဘာ lab facility မှမရှိ။ ကျောင်းသူ။ ကျောင်းသားတွေလည်း ပျက်စီး။ စိတ်ပျက်စရာကြီးပါပဲ။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း တိုးတက်အောင် ဘာမှ မထောက်ပံ့တဲ့ အပြင် လယ်တွေသိမ်းတာမျိုး အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းတာတွေ ကြောင့် တောင်သူတွေဟာ အရမ်းဖိနှိပ်ခံရပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဍကတော့ အရမ်းကို ခေတ်နောက်ကျနေဆဲပဲ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းခံရတဲ့ ဒေသတွေဆို အခုထိ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း နာလန်မထူနိုင်သေးဘူးတဲ့။
နာဂစ် တုန်းကအခြေအနေကို ဥပမာထားကြည့်ရင်တော့ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ပြည်သူအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထား က ရှင်းနေတာပဲ။ ကိုယ်တိုင် ကယ်ဆယ်ရေး မလုပ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံတာကာက ကယ်ဆယ်ရေး တွေကို နှစ်ပါတ် ကြာတဲ့အထိ ဝင်ခွင့်မပေး။ သေသွားသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေတောင် ဒီတိုင်း ပုတ်ပြက်ဆွေးသွားတဲ့ထိ ပြစ်ထားတယ်။ နောက်မှ ဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင် ကယ်ဆယ်ရေး အတွက် လာ စီစဉ်ရတဲ့ အထိ။ အဲ့ဒီနောက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ အများစုဟာလည်း စစ်တပ်ထဲရောက် သွားတယ်။ သန်းရွှေကတော့ သူအာဏာတည်မြဲရေး plan ကို လုံးဝ အပျက်မခံ။ referendum ကို မျက်နှာပြေါင်ပြေါင်နဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။
စီးပွားရေးလုပ်သူတွေမှာကတော့ လုပ်ငန်းကြီးများ လုပ်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဗိုလ် ဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဝေစားမျှစား လုပ်မှကို ရပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဈေးထဲဆိုင်ဖွင့်တာလောက်ပဲရမယ်။ trading နဲ့ manufacturing ဆိုလို့ကတော့ အားလုံး သူတို့နဲ့ ဝေစားမျှစား မှကို ရတာပါ။ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း နအဖရဲ့ ဦးပိုင် economic holding ltd နဲ့ သူတိုရဲ့ tycoons တွေကတော့ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို လက်ဝါးကြီး အုပ်ပြီးပါပြီ။ ဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပဲ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး တွေကို ထူး-တေဇ max-ဇော်ဇော်၊ အေးရှားဝေါလ် - ထွန်းမြင့်နိုင်။ ကမ࿿ဘောဇ-အောင်ကိုဝင်း၊ စတဲ့ လူတွေက ခွဲဝေ ယူပြီးသွားပါပြီ။ ဒါနဲ့ပြေါရရင် ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ အခွန် ဘယ်လောက် ပေးနေသလဲ။ အငယ်စား လုပ်ငန်း လေးတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ဝယ်တာမျိုးကို ကျတော့ အခွန်ငွေ မတန်တဆတောင်းနေတယ်။ ဒီလို ဒီးပွားရေး စံနစ်မှာ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုတွေ ဘယ်လိုမှ ရပ်တန့်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ပင်စင်စားတွေဆိုတာ ဘာမှကို မရကြရှာဘူး။ ဟိုအရင်က ပင်စင်ယူတဲ့သူဟာ အဲ့ဒီအချိန်က လခနှုံးအတိုင်း မူတည်ပြီး ရတယ်။ ဥပမာ- ၁၉၉၀ လောက်က ၃၀ဝ၀ လောက်ရတဲ့သူက အခု ပင်စင်လခ ၉၀ဝလောက် ပဲရတယ်။ အမှန်ဆို အဲ့ဒီခေတ်က ၃၀ဝ၀လစာက အခုခေတ်မှာ ၆၀,ဝ၀ဝ လောက် ရှိတယ်။ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေခမျာ ဒီပိုက်ဆံလေး ၁၀ဝ၀ ﻿လောက်ကို တပင်တပန်း လာထုတ်ကြရရှာတယ်။ busကားဖိုး နုတ်လိုက်ရင် ဘာမှ မကျန်ဘူး။
အစိုးရ ဝန်ထမ်းအားလုံး ခြုံကြည့်ရင်တော့ လခနည်းလွန်းတာကြောင့် လဘ်စားမှုတွေ တိုးပွားနေတာပဲ။ စစ်တပ် အရာရှိတွေကတော့ တခြါး အခွင့်အရေး ပေါင်းစုံရတဲ့ အပြင် လခလည်း ကောင်းပါတယ်။ ညွှန်မှုးတစ်ယောက်ရဲ့ လစာဟာ ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့လစာနဲ့ ညီတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို မညီမျှမှုတွေ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုတွေနဲ့ bureaucracy ယန္တယားမှာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေနဲ့ ဒီနိုင်ငံ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်မလဲ။
အပိုင်း ၂ ဆက်ရေးပါမယ်။
Related posts: ။ income and price
Burma and SPDC (I)
Posted by Daythanix Chann at Wednesday, June 02, 2010 No comments:
[Zawgyi-one version can be found here.]ဟိုတဈနကေ့ May 30 ရကျဟာ ဒီပဲယငျး လုပျကွံမှု ၄နှဈ ပွညျ့တဲ့နေ့။ ယုတျမာကောကျကဈြ အောကျတနျးကတြဲ့ အစီအစဉျကို ဗိုခြုပျစိုးဝငျးက စီစဉျတယျ။ ထောငျသားတှကေို လေးကငျြ့ပွီး NLD အဖှဲ့သားတှကေို အသရေိုကျသတျခိုငျးခဲ့တယျ။ ၁၀၀ နီးပါးသဆေုံးခဲ့ရတယျ။
NLD အဖှဲ့သားတှေ ဒီလို ဘာလို့ အသကျ စတေးခဲ့ရသလဲ။ ပွညျသူလူထုအတှကျပါပဲ။ ပွညျသူလူထုကို စဈကြှနျဘဝက ကယျဆယျဖို့ NLD နဲ့ ဒီမိုကရစေီအရေး လှုပျရှားသူတှေ ကြောငျးသား/သူတှေ အသကျ စတေးခဲ့ရတယျ။ ထောငျနှဈရှညျတှေ ကခြဲ့တယျ။ စဈကြောရေး စခနျးတှကေ လူမဆနျ နှိပျစစကျမှုတှေ ခံခဲ့ရတယျ။
ကြှနျတျော ရေးကွညျ့ခငျြပါတယျ။ စဈတပျရဲ့ အပွဈမဲ့သူတှကေို သတျခဲ့ ထောငျခခြဲ့တဲ့ အကွောငျးတှပွေနျ မပွောပဲတောငျ သူတို လုပျရပျတှေ တှဟော ဒီတိုငျးပွညျအပျေါ ဘယျလောကျ ဆိုးရှားတယျဆိုတာ။ (ဘာလိုလဲဆိုတော့ စဈအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ပညာမဲ့ လူတနျးစားက ကြှနျတျေတို့တှေ စဈအစိုးရကို အကွောငျးမဲ့ ဆနျ့ကငျြ﻿နတေယျ ထငျနကွေသေးလို့ပါ။)
စဈအာဏာပိုငျတှေ အနနေဲ့ အာဏာက လုံးဝ ဆငျးမပေးခငျြဘူးဆိုရငျတောငျ သူတို့ရဲ့ လကျဝါးကွီးအုတျ စီးပှားရေးကိုတော့ လြှော့သငျ့ပွီ။ Gas နဲ့ ရနေံ တှရေောငျး၊ သဈတောတှခေုတျရောငျး၊ ကြောကျစိမျးတှေ… လကျညှိုးထိုး ရောငျးစား . . . ပွီးတော့. . . ရတဲပိုကျဆံကို ကိုယျ့အိတျထဲထညျ့၊ စဈလကျနကျတှဝေယျ၊ ကပျြပွေးမွို့တျောကိုဆောကျ၊ လှိုငျဂူတှတေူး၊ ပွောရရငျ မဆုံးဘူး။ ရှိသမြှ မွဈတှေ ပိတျပွီး ရကောတာတှေ ဆောကျတယျ၊ နိုငျငံရဲ့ အနာဂါတျမှာ သဘာဝဂဟေစံနဈ ပကျြစီးမှာ အရေးမထားဘူး။ ရသမြှ ရအေားလြှပျစဈ နိုငျငံခွားရောငျးစားအုံးမယျ၊ ပွညျသူတှမှော အမှောငျထဲမှာနနေရေတယျ။ ရသမြှ Gas နိုငျငံခွားရောငျးစားပွီး ပွညျသူတှမှော အမှောငျထဲမှာနနေရေတယျ။ နိုငျငံမှာ မီးလငျးတဲ့နရောဆိုလို့ ကပျြပွေးမွို့တျောပဲရှိတယျ။ မီးမရှိတော့ လူတှမှော ကိုယျ့ဟာကို မီးစကျပဲ အားကိုးရတယျ။ တဈမွို့လုံး မီးစကျသံ ဆူညံညံ ကွားမှာ။ စကျဆီနံ့တှကွေားမှာ။
စီးပှားရေးစံနဈ မပွောငျးသရှေ့ ငှကွေေးဖောငျးပှမှု ရှိနသေရှေ့ လခစားတှအေဖို့ ဘယျလိုလခတိုးတိုး ခြောငျလညျလာမှာ မဟုတျဘူး။ အကြိုးဆကျ လာဘျပေးလာဘျယူ တှနေဲ့ ဝဲလညျနအေုံးမှာပဲ။ ပွညျသူလူထုမှာ ဆငျးရဲတှငျးနကျနမှောပဲ။ နအဖကတော့ တိုငျးပွညျစညျးပှားရေးသညျ ငါတို့ အတှကျဆိုပွီးဆကျ လုပျနလေရေဲ့ ။ နအဖအနနေဲ့ အာဏာကို ဆကျကိုငျထားခငျြသေးတယျ ဆိုရငျတော့ ပွညျသူလူထုကွိုကျအောငျ နပွေပေါ့။ နိုငျငံ့ ဘဏ်ဍာကိုသုံးပွီး ကွံ့ဖှတျက လုပျပေးတာပါလို့ အမညျခံပွီး လမျးခငျးပေးတာလောကျကတော့ ဘယျသူမှ အရူးလုပျ မခံဘူး။
စီးပှားရေး ဒုက်ခတှေ ခံစားနရေတဲ့ ပွညျသူလူထုမှာ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ကောငျးကောငျးမရှိဘူး။ ပွောရရငျ ပွညျသူဆေးရုံဆိုတာ ဆရာဝနျပဲရှိပွီး ဘာ facility မှမရှိလို့ ငှကေုနျကွေးကြ မြားတဲ့ ပုဂ်ဂလိကဆေးခနျးပဲ အမြားစု အားကိုးနကွေရတယျ။ စဈတပျဆေးရုံတှမှောတော facility အပွညျ့ အပြံစားဆိုပဲ။ အခုလကျရှိ ပွညျသူလူထုရနတေဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု အမြားစုကလညျး UNICEF, UNDP စတဲ့ UN အဖှဲအစညျးတှနေဲ့ အခွား INGO တှေ ကလုပျပေးနတော။ (နအဖက သူတို့လုပျသလို ဟနျဆောငျနတော)။ ဒီ INGO တှမှော ကူညီတာတောငျ အတားအဆီး အမြိုးမြိူးကွားက ခကျခကျခဲခဲ ကူညီကွရတယျ။
ပညာရေးစံနဈကလညျး လုံးဝ ယိုယှငျးနပွေီ။ အခွခေံပညာရေးမှာဆိုလညျး ဆရာ၊ဆရာမတှေ လခမလုံလောကျရာက လေးစားထိုကျတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတှမှော တပွားမရှိတဲ့ပွဿနာ ကို ဦးစားပေး ဖွရှေငျးရတော့တယျ။ ကလေးတှေ ကိုယျ့ဆီ ကြူရှငျတကျမှ ဆိုတာမြိုး၊ လကျဆောငျပေးမှ အမှတျတိုးပေးတာမြိုး၊ ဝမျးနဲစရာ ပကျြစီးမှုတှေ ရှိလာပါတယျ။ ကြောငျးအဆောငျအဦတှမြေား ဆိုလညျး စုတျပွတျသတျနတေဲ့ ကြောငျးတှေ အမြားကွီး။ Lab ဆိုတာတော့ ဘာမှနျးကိုမသိဘူး။ အဆငျ့မွငျ့ ပညာရေးကတော့ စုတျပွတျသတျနပွေီ။ တက်ကသိုလျတှကေ တောထဲမှာ။ ဘာ lab facility မှမရှိ။ ကြောငျးသူ။ ကြောငျးသားတှလေညျး ပကျြစီး။ စိတျပကျြစရာကွီးပါပဲ။
လယျယာစိုကျပြိုးရေးကိုလညျး တိုးတကျအောငျ ဘာမှ မထောကျပံ့တဲ့ အပွငျ လယျတှသေိမျးတာမြိုး အဓမ်မ လုပျအားပေးခိုငျးတာတှေ ကွောငျ့ တောငျသူတှဟော အရမျးဖိနှိပျခံရပါတယျ။ စိုကျပြိုးရေး ကဏ်ဍကတော့ အရမျးကို ခတျေနောကျကနြဆေဲပဲ။ နာဂဈမုနျတိုငျးခံရတဲ့ ဒသေတှဆေို အခုထိ စိုကျပြိုးရေး လုပျငနျး နာလနျမထူနိုငျသေးဘူးတဲ့။
နာဂဈ တုနျးကအခွအေနကေို ဥပမာထားကွညျ့ရငျတော့ စဈအာဏာရှငျရဲ့ ပွညျသူအပျေါထားတဲ့ သဘောထား က ရှငျးနတောပဲ။ ကိုယျတိုငျ ကယျဆယျရေး မလုပျတဲ့အပွငျ နိုငျငံတာကာက ကယျဆယျရေး တှကေို နှဈပါတျ ကွာတဲ့အထိ ဝငျခှငျ့မပေး။ သသှေားသူတှရေဲ့ အလောငျးတှတေောငျ ဒီတိုငျး ပုတျပွကျဆှေးသှားတဲ့ထိ ပွဈထားတယျ။ နောကျမှ ဘနျကီမှနျးကိုယျတိုငျ ကယျဆယျရေး အတှကျ လာ စီစဉျရတဲ့ အထိ။ အဲ့ဒီနောကျ နစေ့ဉျရကျဆကျ ရောကျလာတဲ့ နိုငျငံတကာ အကူအညီတှေ အမြားစုဟာလညျး စဈတပျထဲရောကျ သှားတယျ။ သနျးရှကေတော့ သူအာဏာတညျမွဲရေး plan ကို လုံးဝ အပကျြမခံ။ referendum ကို မကျြနှာပွောငျပွောငျနဲ့ မဖွဈဖွဈအောငျ လုပျတယျ။
စီးပှားရေးလုပျသူတှမှောကတော့ လုပျငနျးကွီးမြား လုပျမယျဆိုရငျ သကျဆိုငျရာ စဈဗိုလျ ဝနျကွီးတှနေဲ့ ဝစေားမြှစား လုပျမှကို ရပါတယျ။ ဒါမှ မဟုတျရငျတော့ ဈေးထဲဆိုငျဖှငျ့တာလောကျပဲရမယျ။ trading နဲ့ manufacturing ဆိုလို့ကတော့ အားလုံး သူတို့နဲ့ ဝစေားမြှစား မှကို ရတာပါ။ အားလုံး သိတဲ့အတိုငျး နအဖရဲ့ ဦးပိုငျ economic holding ltd နဲ့ သူတိုရဲ့ tycoons တှကေတော့ နိုငျငံ့စီးပှားရေးကို လကျဝါးကွီး အုပျပွီးပါပွီ။ ဒီရကျပိုငျးလေးမှာပဲ နိုငျငံပိုငျစီးပှားရေး တှကေို ထူး-တဇေ max-ဇျောဇျော၊ အေးရှားဝေါလျ - ထှနျးမွငျ့နိုငျ။ ကမ်ဘောဇ-အောငျကိုဝငျး၊ စတဲ့ လူတှကေ ခှဲဝေ ယူပွီးသှားပါပွီ။ ဒါနဲ့ပွောရရငျ ဒီလုပျငနျးရှငျကွီးတှေ အခှနျ ဘယျလောကျ ပေးနသေလဲ။ အငယျစား လုပျငနျး လေးတှနေဲ့ ကိုယျပိုငျအိမျ ဝယျတာမြိုးကို ကတြော့ အခှနျငှေ မတနျတဆတောငျးနတေယျ။ ဒီလို ဒီးပှားရေး စံနဈမှာ ငှကွေေး ဖောငျးပှမှုတှေ ဘယျလိုမှ ရပျတနျ့မှာ မဟုတျဘူး။
ပငျစငျစားတှဆေိုတာ ဘာမှကို မရကွရှာဘူး။ ဟိုအရငျက ပငျစငျယူတဲ့သူဟာ အဲ့ဒီအခြိနျက လခနှုံးအတိုငျး မူတညျပွီး ရတယျ။ ဥပမာ- ၁၉၉၀ လောကျက ၃၀၀၀ လောကျရတဲ့သူက အခု ပငျစငျလခ ၉၀၀လောကျ ပဲရတယျ။ အမှနျဆို အဲ့ဒီခတျေက ၃၀၀၀လစာက အခုခတျေမှာ ၆၀,၀၀၀ လောကျ ရှိတယျ။ ခြို့ခြို့တဲ့တဲ့ အဖိုးကွီး အဖှားကွီးတှခေမြာ ဒီပိုကျဆံလေး ၁၀၀၀ ﻿လောကျကို တပငျတပနျး လာထုတျကွရရှာတယျ။ busကားဖိုး နုတျလိုကျရငျ ဘာမှ မကနျြဘူး။
အစိုးရ ဝနျထမျးအားလုံး ခွုံကွညျ့ရငျတော့ လခနညျးလှနျးတာကွောငျ့ လဘျစားမှုတှေ တိုးပှားနတောပဲ။ စဈတပျ အရာရှိတှကေတော့ တခွား အခှငျ့အရေး ပေါငျးစုံရတဲ့ အပွငျ လခလညျး ကောငျးပါတယျ။ ညှနျမှုးတဈယောကျရဲ့ လစာဟာ ဗိုလျကွီးတဈယောကျရဲ့လစာနဲ့ ညီတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလို မညီမြှမှုတှေ ငှကွေေး ဖောငျးပှမှုတှနေဲ့ bureaucracy ယန်တယားမှာ လာဘျပေး လာဘျယူမှုတှနေဲ့ ဒီနိုငျငံ ဘယျလို ရှဆေ့ကျမလဲ။
အပိုငျး ၂ ဆကျရေးပါမယျ။
Labels: Burma, commentary, economy, freedom, justice